Gịnị bụ ihe kasị mma mpịachi electric igwe kwụ otu ebe na ahịa? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Radmini electric mpịachi abụba igwe kwụ otu ebe - ihe ngwọta na-
Gịnị bụ ihe kasị mma mpịachi electric igwe kwụ otu ebe na ahịa?
Best mpịachi e-anyịnya igwe
BromptonEletriki. Kpochapụwo imewe na mpụga ike mkpọ.
UgboEletriki2.0. Nakacha mmafechaampịachi electric igwe kwụ otu ebe.
Gocycle GX. Ọ ga-ekwe omume n'ọdịnihu nkempịachi e-anyịnya igwe.
Tern Vectorron Q9. A.ukwu e-igwe kwụ otu ebemmalite nkempịachi igweusoro.
Akwụkwọ XP. Gaa ebe ọ bụla, jiri obere mgbalị.
Eprel 21 2021
Hey ụmụ okorobịa, ka anyị kwuo maka igwe igwe eletrik kachasị mma na ahịa ugbu a, ebe ọ bụ na 2012 ekpuchiwo m ụdị 118 dị iche iche dabara na nke a mana anaghị m ekpuchi ha niile, m gụrụ ihe ndị a, biko hapụ m mara ma enwere ihe m leghaara anya ma ọ bụ ihe ọhụrụ ma ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mgbe ndị ọzọ nwere ike ịhụ ma dozie nke ahụ. Laghachi na weebụsaịtị m nwere otu edemede, ị nwere ike ịhụ nyocha niile dị iche iche m nwere. Enwere m edemede nke 30 na ụdịdị niile.
Enwere nnukwu ihe eji atụnyere ngwa na enwere ọgbakọ. Yabụ ị ga - ahụ ihe ndị nwe ya na - ekwu. Naanị m nwere igwe kwụ otu ebe a maka otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ maka ọtụtụ akụkụ ma ana m eme ike m niile, mana ebumnuche m bụ inyere gị aka n'ezie.
Site na nke ahụ, ka anyị bido ozugbo. Ya mere, buru ụzọ họrọ nhọrọ. Ọ bụrụ na ọnụahịa bụ obere nsogbu gị, ana m akwado Gocycle GS.
Ọ dị ntakịrị ihe nhịahụ n'ihi na ha nwere GX, G3, ha nwere igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ karịa ihe dịka $ 4,500, mana nke ahụ bụ $ 2,800, na ihe na-eme igwe kwụ otu ebe a pụrụ iche bụ na Gocycle na-eme igwe igwe eletrik. Onye guzobere ya bụ onye mmebe na McLaren, ụlọ ọrụ ụgbọ ala egwuregwu. Chee echiche dika Ferrari ma obu Lamborghini. ọ maara ụzọ ya gburugburu na o kere ihe pụrụ nnọọ iche.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ anya na igwe kwụ otu ebe na ọ bụ dị iche iche. Ahụ bụ nke magnesium, ọ bụ ìhè. O nwere eriri mechiri emechi na agbụ ahụ agaghị ada, ọ ga-esi ike.
Nke ahụ bụ ihe m na-eche banyere. Maka na ọ bụrụ na ị fụkọta, tinye igwe kwụ otu ebe n'akụkụ ya, enwere ike ịnọ n'ọnọdụ mara mma n'ụgbọ ala gị, ị nọ n'ụgbọelu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọnọdụ dị. ma i nwekwara gia.
Ọ nwere a 3-ọsọ ehiwe na esịtidem gia ruru na n'azụ. Put tinye engine ahụ n’ihu. Ọ bụghị ihe kachasị ike, mana ọ mara mma.
Ọ na-eme obere mkpọtụ, mana imirikiti igwe kwụ otu ebe a nwere ụdị nkwekọrịta. Ya mere, ọ dị m ka ọ dị na Gocycle, ha chọrọ ihe dị mfe ma dị ọcha ma mara mma na-ele ya anya ma ha na-eme ya nke ọma. A na-etinye batrị na etiti.
Mfe ebe a. Ha nwere mudguards ndị a dabara adaba, ha nwere akpa nhọrọ, ha nwere ọkụ na ihe ahụ, yana mgbakwunye na enyemaka ị na-aga, o nwere obere mkpirisi trotul, nke dị jụụ. Dị ka ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na ndepụta a, naanị nke a na-abịa n'otu nha, mana ụdị oche ahụ na-adọta azụ na telescopes ọ na-aga nke ọma.
Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye toro ogologo ị ka nwere ike ịdabere na ya ma ọ ga - eme ka iru gị rute ka ọ na - agbatị ụkwụ gị. Couplefọdụ ihe ndị ọzọ masịrị m banyere igwe kwụ otu ebe a bụ akụkụ dị iche iche na-atụgharị uche na taya ndị a iji mee ka ha hụ ma nwee nchedo, ebe ị nọ n'ụgbọ ụkwụ na-apịaji, ha na-adị ala karịa ala. Ma mgbe gị na ya soro mee njem, ị nọ ebe ọhụụ, ọ dị mma ka a hụ ya anya, ụgbọ ala ma ọ bụ ihe ọ bụla agaghị akụ gị, nkasi obi ọ na-enye na-amasịkwa m, yabụ taya ndị a nwere ntakịrị ikuku.
Na mgbe ị na-eche banyere obere taya dayameta, ha na-agba ọsọ n'ime ihe. Get nweta akuku ọgụ a dị elu ma e jiri ya tụnyere nnukwu, ọmarịcha nnukwu taya nke nwere ụda ikuku dị elu, ọgụ dị ala, yabụ buru n'uche nke ọ bụla n'ime igwe kwụ otu ebe na ndepụta a. Ọ na-amasị m na ha nwere obere mmiri mmiri n'ihu.
Ọ bụghị ihe magburu onwe ya, mana ọ ka mma karịa ihe ọ bụla. Ma mgbe ahụ, enwere obere ihe mgbochi ahụ na azụ, ezigbo nhọrọ, ọ bụkwa ụlọ ọrụ n'echiche m. Ihe na-esote bụ igwe eletrik eletrik na-aba ụba na uru kacha mma maka ego.
Ọ bụ ya mere m ji họrọ Magnum Classic. Nke a bụ igwe eletriki igwe na-agagharị agagharị nke nwere ndụdụ ọdịnala, nkwụsị oche oche, ka nwere taya na-ebu olu na-egosi na akụkụ sidewall na-atụgharị uche. Ma nke a na-abịa na fenders na ọ na-abịa na ọkụ.
O nwere igwe eletriki igwe na 500 watt na batrị batrị di nma. Aha ya bụ Silverfish. Yabụ na ọ bụ ụdị ngwugwu ọdịnala ị nwere ike ịchọta, ọbụlagodi na Magnu pụọ na azụmaahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla, ị nwere ike nweta akwụkwọ a na ụlọ ọrụ dịka FTH Power na California.
Maka m nke a bụ ihe m na-eche banyere, olee ụdị modular nke ahụ bụ? Ọ bụrụ na ị na-ele Gocycle ha stof niile bụ n'ezie bespoke, batrị na etiti na. Ọ na-ama mara mma. Mgbe ị gara n'akụkụ nke ọzọ ị na-eche, ọ dị mma, gịnị ka m ga - eme onwe m? Kedụ ka ị ga - esi mezie ya n’onwe gị? Site na Magnum ebe a, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ihe na-emegharị ihe, ị ga-enweta aka pedal sensor, ị ga-enweta cassette megide ngwa ngwa ọsọ 3 ahụ.
Yabụ na ọ bụghị nke ahụ ọfụma, mana ị na-enwetakwu mgbatị ma ọ na-arụ ọrụ. Ugbu a, ọ nwere n'ibu diski brek na waya rims mgbe ị nwetara kpochapụwo Magnum nke ahụ bụ ihe dị ka otu puku dollar na-erughị Gocycle, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ị nwere ike nweta nkwalite na Magnum Premium, nke nwere haịdrọlik diski brek. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịnwe obere aka ma ọ bụ ikekwe na-eyi uwe dị ka m bụ taa ma nke a nwekwara agba magnesium nke na-enye ya ìhè ntakịrị ike.
Mgbe ị bụ onye toro ogologo karịa ma sie ike. Ahụrụ m ọtụtụ mmadụ na-apịgharị igwe eletrik eletrik naanị n'ihi na ha nwere ike ịnweta ya, etiti ahụ pere mpe. Ha dịkwa ka, ee, enwere m mmasị na nke ahụ.
Ọ na-adị m ka m na-achịkwa igwe kwụ otu ebe. Ọzọkwa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ìhè dị ka Gocycle, mana ị na-echekwa otu puku dollar wee nweta obere ọrụ, ma ị nwekwara ndị na-ere ahịa na ihe ndị ọzọ, Magnum na-arụ nnukwu ọrụ n'ụzọ ahụ, ọ bụ ya mere m ji nwee obi ụtọ kwadoro ha. Na-esote anyị nwere igwe eletriki igwe eletrik kachasị mma, maka nke ahụ, ejiri m Sondors mee ihe ọfụma, ọ bụ usoro a na-enweta-site na etiti, o zuru oke ka ị wee nwee mgbatị ụkwụ ahụ mara mma ma ọ dịkarịrị ala karịa ịnyagharị ogologo oge.
O nwekwara oke ikuku na ikuku dị ala, yabụ taya 27.5 'x 3' gbakwunyere nnukwu taya tinyere ndụdụ nkwusioru bụ otu n'ime igwe eletriki eletriki foldable kachasị mma na ahịa. Sondors nwekwara mmanụ dị ka igwe eletrik eletrik na taya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime nke ahụ. Yabụ ịhụ ụlọ ọrụ nwere ụdị mpịachi abụọ dị iche iche, mana nke ọ bụla nwere ihe pụrụ iche. Echere m na nke ahụ dị mma.
Maka ndị mmadụ chọrọ ahụmịhe ịgba ígwè zuru ezu, mana ha chọrọ obere ọnụ ahịa nke otu puku dollar, nke ahụ adịghị njọ. Ọ naghị abịa n’ìhè, ọ naghị abịa n’ihe ọkụ. Ọ bụghị obere na obere.
Ọ dịkwa ntakịrị karịa ma ị ga - enweta obere obere moto na ndị 350 watts. Ya mere, ọ bụ ụdị ike kwụsịrị, nke a bụ igwe kwụ otu ebe. N'adịghị ka Gocycle ma ọ bụ Magnum, ebe ị nwere ike ịbanye n'ụlọ ahịa ma nweta nkwado, ị dị ntakịrị karịa onwe gị.
Have ga-itopusi a na aka ahịhịa na mgbe ahụ i nwere ụdị nke ya elu na idozi ya. Mana maka otu puku dollar, echere m na nke a bụ nhọrọ magburu onwe ya. M tụkwasịrị obi unu ụmụ Sonmụaka.
Ha anọwo nso nwa oge ugbu a, ha mere igwe eletriki igwe eletrik ndị a na-enweghị atụ na nke ahụ bụ maka m chere na nke a ma ọ bụ ụfọdụ n'ime nhọrọ mpịachi ndị ọzọ ha kwesịrị ịtụle. Ihe na-esote bụ igwe eletrik eletrik a na-akpọsa. Izọ m si arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ bụ ikpuchi ọtụtụ igwe kwụ otu ebe.
Na mgbe ọ na-adị m ka ụlọ ọrụ na-arụ ezigbo ọrụ, ana m asị, hey, ị nwere ike ịdọnye ya na ngalaba a, otu igwe kwụ otu ebe na otu, m ga-ekwukwa aha gị n'isiokwu ndị a. Ma ana m eme nke a maka igwe kwụ otu ebe nke masịrị m na ụlọ ọrụ ndị m tụkwasịrị obi. Ma nke ahụ bụ ikpe ebe a.
Anyị na-ekwu maka Blix na nke a bụ igwe eletriki igwe eletrik ha Vika tinyere. Nke a nwere ike bụrụ folda mara mma na ndepụta a. Ọ bụ nnọọ kpochapụwo ụzọ site na fenders.
Ọ nwere ndị mara mma aja aja zuru akpụkpọ anụ ịlesụ na sadulu na-ejikọ n'ezie ọma. All ndị ọzọ accents dị ka kwuru handlebars, azuokokoosisi, na crank ogwe aka, ndị yinye niile bụ ọlaọcha. Yabụ nke ọma.
Na igwe kwụ otu ebe a nwere ihe niile ịchọrọ. Ọ nwere obere akpa akwa maka azụ y panties ma ọ bụ akpa akpati. O nwere fend a ma nwee ọkụ, ọkụ ndị a wuru n’ime ya na-agba batrị.
Batrị ahụ nwere ikike dị oke elu ma rụọkwa ọrụ. Yabụ Blix nwere igwe eletrik eletrik na batrị ga-arụ ọrụ na nke ọ bụla n'ime ha. Nke ahụ dị mma mgbe ị kwụsịrị na ihe ndị a dị ka nwoke na ezinụlọ.
Ha na-erekwa n'ụlọ ahịa. Mana ya na Blix, obu ihe nlere. Yabụ ịnwere ike ịnwale igwe kwụ otu ebe, gbagoo ma metụ ya aka, nweta ngwa na ihe ndị dịka akpa, ikekwe oche ụmụaka, okpu agha, mana ị na-enye iwu ozugbo site na Blix ma a ga-ebute ya ozugbo na ụlọ ahịa ahụ wee nata ọrụ.
Yabụ ọ bụ ụdị ngwakọ ngwakọ. Ma ihe ịnweghị igwe kwụ otu ebe a bụ ndụdụ nkwusioru ma ọ bụ oche nkwụsị. Taya ndị ahụ dị mma nke ukwuu, ha nwere mpempe akwụkwọ akụkụ akụkụ na-egosipụta, mana ha dị obere karịa ọdịnala.
Ha enweghị pimpụl na ha adịghị ka olu dị elu, ị ga-enweta mbuso agha ahụ dị elu mana ị ga-echekwa ụfọdụ ọfụma, ọ gaghị enwe nnukwu ihe nkedo ma ọ gaghị ebu ibu, nye m igwe kwụ otu ebe a na-enye ọtụtụ uru na ọ mara mma. Gwọ ahụ adịghị oke njọ na gburugburu $ 1,600. Laghachite na weebụsaịtị enwere ngwa maapụ nke ị nwere ike iji chọta akara ma ọ bụ ọnọdụ ma gosi gị ụlọ ahịa dị nso.
Olileanya na enwere otu ị nwere ike ile anya wee nwalee ihe a n'oge ụfọdụ. N'ikpeazụ, aha kwesịrị nsọpụrụ. Agunyeghi nkea na otu ndi ozo ma obu ihe puru iche, dika ndi Sondors.
Nzọụkwụ Smart na nke ahụ bụ igwe eletrik eletrik eletrik zuru oke. Nke a bụ igwe eletrik eletrik na-ebu taya. Yabụ na ọ nwere ike ọ gaghị adabara.
Kwesighi ịmanye onwe gị ime nke a, taya abụba na-eme obere mkpọtụ, ha na-agbakwunye ntakịrị ibu. Ha na-agbakwunye nkwụsi ike na nkasi obi, mana nha ahụ na-ebuwanye ibu. Ma nke a bụ igwe kwụ otu ebe, ọ nwere ike ọ gaghị adabara gị.
Ya mere ndị a bụ Rad Power Bikes, Radmini, na m gara maka Nzọụkwụ-Thru, mana ha nwekwara ụdị ọkwa dị elu. Cheta, igwe kwụ otu ebe a masịrị m n'ihi na batrị dị adị. Ọ dabara na igwe eletriki ike Rad ndị ọzọ niile.
Ha nwere ihe nkpuchi ihu na nkata na akuku na ihe ndi ozo ndi ozo. Ma igwe kwụ otu ebe n'onwe ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịmeghị, emela nke ahụ, ọ na-abịa na nnukwu fenders yana ha zuru oke, ha bụ plastik, ha na-eme ka ị ghara ịdị ọcha ma dị ọcha. Mgbe ị ji okporo ụzọ ndị ahụ nwere abụba pụọ, nke ahụ bụ ihe dị mma.
O nwekwara ọkụ dị n’ime ya, dịka Blix Vika Plus ahụ ekwuru na mbụ. Na ọkụ na obere ikpo okwu dị ukwuu. Ọ dị mma naanị ịhụ ya anya, ka ị na-ahụ anya.
Igwe ọkụ azụ ha pụrụ iche n'ihi na ọ nwere ọnọdụ na-egbu maramara na ọkụ ọkụ breeki. Ọ bụ a obere nweta nkwalite. Taya ndị ahụ nwere mgbidi akụkụ mgbidi ma na-agba akaebe mgbapụta, nke dị mma.
Ihe akọrọ bụ otu ruo asaa, dị ka Blix Vika Plus, mana o nwere ezé iri na otu ruo iri anọ na anọ kama iri na anọ ruo iri abụọ na asatọ. N'ihi ya, ọ bụ n'ezie usoro nha sara mbara, nke dị ezigbo mkpa mgbe igwe kwụ otu ebe na-ebuwanye ibu ma ị nwere ike ịbụ ụzọ-ụzọ bụ. Enwere ike ịnweta igwe kwụ otu ebe.
Nzọụkwụ maka okpokolo agba nwere ntakịrị mgbanwe, ọkachasị site na itinyekwu ibu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnata ogbe nhọrọ nke ibu ma buru ya. Ya mere buru nke ahụ n'uche, mana n'ozuzu igwe kwụ otu ebe dị ukwuu. Ọ nwere trotul, o nwere a cadence mmetụta pedal aka.
Ọ na-arụ ọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na rad enweghị nnukwu ụlọ ọrụ na-ere ahịa dịka Magnum ma ọ bụ Gocycle ma ọ bụ Blix, ọ dị ka Sondors na ị nwere ike ịtụ ya na ntanetị wee nweta igbe, mana ha nwekwara vans ndị a dị mma nwere ike ịkpọkọta ya ma nyefee ya. ị, nke na-eme ka ihe dịtụ ntakịrị mfe. Ha na-ere na US, Canada na akụkụ nke Europe.
Ha nwere ulo ahia di elu. Yabụ ma eleghị anya ị nọ n'udo. Ndi be anyi achoro m na nke a ga enyere unu aka.
Mpempe akwụkwọ mpịakọta bụ otu n'ime saịtị ndị kachasị ewu ewu na saịtị ahụ, enwere m ike ịhụ ihe kpatara ya, igwe eletriki e-keke na-adị mfe ịhapụ mgbe ị jidesiri ike na ohere ma ọ bụ ikekwe onye hụrụ njem n'anya nwere moto ma ọ bụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọzọ ụgbọelu ma ọ bụ naanị akpati na ị chọrọ dabara na ya. Ọ na-eme ka ọ dị ọcha karịa itinye ya na ebe a na-anya ụgbọ ala. Ngwongwo igwe kwụ otu ebe na-efu ego.
Ikekwe ị chọrọ towbar maka ụgbọ ala gị. Y’oburu n’acho iburu ibu e-bike. Ma enwere ụfọdụ azụmaahịa.
Nwere ike ịnweta igwe eletriki igwe eletriki nwere eriri siri ike nke na-agaghị ehulata. Ma eleghị anya, dị ka mpịachi igwe kwụ otu ebe, mgbe ụfọdụ, ha na-erughị ala. Cannwekwara ike ịnwe igwe eletriki igwe eletrik zuru oke na wiilị ntọhapụ ngwa ngwa na batrị nwere ike iwepụ.
Enwere otutu nhọrọ ma eme m ihe ndị a dị ka ndepụta kachasị mma ebike maka ụdị 11 kachasị elu na elektrikbikerview .com ya mere ọzọ lelee nke a, lelee ọwa ahụ, ana m enyocha oge niile m hụrụ unu n'anya, ụgbọala n'enweghị nsogbu ma anyị ga-ahụ gị ọzọ. (Nnụnụ na-ebe ákwá)
Ime igwe ike Rad na-agbaji?
Nke siri ikempịachiike gụnyere ergonomic njikwa na pedals nanwere ikebe beaked-in-enyere gị aka nweta ọtụtụ n'ime ohere gị.
Hey ụmụ okorobịa, Abụ m Alastair si Trail & Kale ma taa, m ga-anwale ọzọ Rad Power Bike na oge a enwere m rad mini 4! Yabụ nke a bụ e-igwe foldable efere si Rad Powerbikes. Ha na eme ihe akpọrọ steepụ abụọ um. Ihu ọma ọ bụ a dị ala karị midframe nke mere na nta ma ọ bụ ndị agadi nwere ike mfe karị banye ma na-na igwe kwụ otu ebe na mgbe ahụ pụọ.
Ya mere, ihe ole na ole m chọrọ ikpuchi na nyocha a bụ ụfọdụ ihe dị mkpa nke ị na-enweghị ike ịhụ n'ezie na nyocha ederede. Ka m chetara gị na nke a bụ nyocha n'efu na nyocha m zuru ezu na Trailingkill.com m ga-esonye njikọ ebe a ka ị nwee ike ịchọta ụdị nkọwa ọ bụla ma ọ bụ stats zuru ezu ịchọrọ site na igwe kwụ otu a na nyocha a.
Ọ dị mma, ihe m chọrọ igosi gị na nyocha a bụ ihe ndị dịka ọsọ ọsọ ọsọ, otu esi agbatị igwe kwụ otu ebe a wee weghachite ya na ezigbo ya, yabụ achọrọ m igosi gị ngosipụta ndị a niile na nyocha a n'ihi na nke a Ọ bụ igwe eletriki igwe eletrik dị mma sitere na Rad Power Bikes na ọ dịịrị ọtụtụ mmadụ yabụ m chọrọ igosi gị ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị a dị jụụ na etu esi adị mfe iji kwa, ọ dị mma n'oge na-adịghị anya aga m eji ngosi LCD na gị na mbụ Backlit a panel bụ ebe a, na nke ahụ bụ n'ezie mma ma ọ bụrụ na ị na-ele anya m igwe kwụ otu ebe ịgba ọsọ nyochaa na ị chọpụtara na ọ bụghị n'ebe ya mere na e nwere ihe odometer na-agwa gị otú ebe ị na-arahụ. Enwekwara mita njem nke na-egosi etu ị rutere njem ahụ. N'elu aka ekpe anyi na-egosi gi ososo gi na ike i jiri.
I nwekwara ike ihu otu esi etinye ike enyemaka. Ya mere ike inye aka bụ ihe na - eme mgbe ịmalitere pedal na ike ole ịchọrọ site na batrị na moto iji nye gị pedal ya mere ọ dị mfe pedal na nke ahụ dị mma n'ụzọ ị tụgharịrị ruo mgbe ị hụrụ na ị ga - agba otu ihe ahụ, mana ị ga-aga ọsọ ọsọ karịa ọ gaghị adị mfe dịka ọmụmaatụ ịchụpụ ugwu na nyocha a na ala ala na-atụ anya na ị ga-ahụ Helen enwere obere ọdụ ụgbọ mmiri USB na-akwụ ụgwọ ọdụ ụgbọ mmiri, ka ị nwee ike ịgba ụgwọ ekwentị gị mgbe ị nọ na-akwọ ụgbọala n'okpuru ya, na dịka m kwuru, tupu ọ daa azụ ka ị nwee ike ịhụ ya n'abalị um, ọ bụrụ na ị nwekwara ezigbo akpụkpọ anụ sịntetik mara mma nke na-ejide ebe a na nke ahụ dị mma, kamakwa, n'ihi na ọ bụ ụdị emee ka ị nwee ike ịdabere na ọbụ aka gị na ya ma ọ dị ezigbo mma na aka gị na njikwa ahụ n'akụkụ aka nri gị. Nwere ike ịhụ mkpama ka nke a ghara ịdị na mba ọ bụla.
Yabụ ijide n'aka nyochaa nyocha m zuru oke iji hụ njikọ dị na ala nkọwa ahụ ka ị wee hụ ma enwere njikọ ebe ahụ nke ga - agwa gị ma njirimara ndị a dị na mba gị, mana ị na - adọta naanị gbanwee gas laghachi ma ị pụọ. Nke ahụ dị mma, ịkwesighi ịzọ ụkwụ, yabụ dịka ọmụmaatụ, ị na-eche na ọkụ ọkụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ma gafere n'okporo ámá ngwa ngwa na ngwa ngwa, mee ngwangwa ma gbasaa na-enweghị ịrapara n'okporo ụzọ, gịnị ọzọ, yabụ ọ bụrụ nwere ike ebe a na igwe kwụ otu ebe a na-ahụ na anyị nwere ngwa ọsọ ọsọ asaa dịka onye na-agba ịnyịnya na uche m, nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụghị otu ọsọ dị ka ndị ọgba ọsọ igwe. Rad Mini 4 nwere gearbox ọsọ ọsọ 7 ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya ike nyere aka ihe na-eme ya mere na nke a na-enye aka ma ọ bụrụ na ị na-ebi ebe enwere ọtụtụ ugwu na ịchọrọ iji ike gị gbagoo ugwu ndị ahụ. bụ moto 750 watt ọ ga - enwe nsogbu na ụfọdụ n'ime ugwu ndị a ị ga - akwado moto ahụ n'onwe gị n'ọnọdụ ndị a ị na - akwado ike ma ọ bụghị ike na - enyere gị aka ịrị elu.
Yabụ ịnwe mgbatị ndị ahụ n'akụkụ aka ekpe nke aka na-aba uru n'ezie, dị ezigbo mma ma ebe a anyị nwere mgbanwe atọ. Ọ bụrụ na ịbubaa na nke a ka ị wee hụ ya, ị nwere ọnọdụ elu na ala. Ihu ọma i nwere ike gbanye nnukwu ọkụ ihu na ọkụ azụ, ma na obubọk na igwe kwụ otu ebe ya onwe ya na elu na ala akụ na-enye gị ohere dịkwuo pedaling aka ka ị na-pedal na mgbe ahụ anyị nwere brek n'aka ekpe kwa aka nri n'ihu wee yeah ezigbo ọkọlọtọ e ma ọ bụrụ na ị na-a lee anya na ọkụ ihu ihe nke a bụ ihe ndị a ụmụ okorobịa na-ele anya na n'ezie na igwe kwụ otu ebe na-abịa uninstalled otú ị ga-ezukọta nke niile, um, ma dabere na ọ bụrụ na-amasị gị na Ọ bụrụ na ị mere ihe tupu oge eruo ,, eleghị anya ọ na-ewe naanị ọkara awa iji gwụ ọ were m ihe dị ka ọkara elekere ọ bụla n'ihi na azụrụla m igwe kwụ otu ebe n'oge gara aga, yabụ ọ dị mfe ebe a bụ mkpọ batrị nke na-abịa na obere obere igodo wee nwee ike igbachi ya mgbe ino.
Mgbe ị naghị eji ya, wepụ mkpịsị ugodi ka mmadụ ghara ịgbanyụ igwe kwụ otu ebe n, um, ha nwere ike soro ya, mana ọ bụrụhaala na ị kpọchiri ya ma ọ pụọ ma ị nwere igodo ahụ, ha agaghị ekwe ka ị mbugharị ma nwee olile anya na ị ga-ahụ onye na-anwa iwepụ gị, nke bụ obere njirimara mara mma. Azụ ọkụ ahụ na-arụkwa ọrụ dị ka ọkụ breeki. Yabụ mgbe ị kwụsịrị, ị ga - ahụ ọkụ ọkụ na - abịa.
Nke a dị ezigbo mma mgbe ị na-apụ n'obodo ma ọ bụ n'abalị Ọ bụ ihe nchekwa nchekwa mara mma Plus ị nwere nke a aluminom-aluminium nke nwere eriri plastik na ya nke mere na ọ siri ike na igwe kwụ otu ebe a dị oke mma yabụ echere m na ọ bụ ihe dịka 70 yad paụnd gburugburu ị chọrọ nguzo siri ike ebe a iji jide ibu nke igwe kwụ otu ebe m ga-ewere obere foto ihe atụ na-enye gị echiche nke ibu ka ị wee nwee ezigbo njide na ya. Ọ dị ezigbo mma ọzụzụ m kay, kedu ihe ọzọ ị nwere ndị mudguards ndị ahụ dị mma na n'ihu ha na igwe kwụ otu ebe dị ka akụkụ nke ngwugwu bụ isi nke ahụ na-eme ka azụ gị dị mma ma dị mma ma dị ọcha mgbe ị na-agbago na mmiri mmiri ihe ọzọ ebe a gia na yinye bu, ya mere na nke ahu bu uzo nke asaa tupu ebe a na batrị enwere obere oghere kpuchie ya iji mee ka mmiri ghara ikpuchi ya ka ị na-ebu batrị batrị ahụ dịkwa oke mma maka nchekwa. Kedu ihe ị ga - eme ya, ị gbanye ya wee gbanwee ya ka igwe kwụ otu ebe siri ike karịa ma ị ga - eme nke a mgbe ị na - agbago igwe kwụ otu ebe ka m wee mee ngosipụta nke a n'oge na - adịghị anya.
Na na na, ebe a bụ a usoro na-ahapụ gị n'ogige atụrụ na igwe kwụ otu ebe, ma m ga-egosi na sadulu nwere ụfọdụ mgbanwe. Yabụ ọ bụrụ na ị leba anya n'okpuru ebe a ị nwere ike ịdọnye sadulu ahụ azụ wee pụta wee tinye ya ka ị nwee ike ịnọdụ ala karịa site na njikwa ahụ, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị nwere ụkwụ dị ogologo ị nwere ike iji sadulu ahụ jidesie sadulu ahụ tinye na ala dabere na ịdị elu gị na otu ihe ahụ na mkpịsị aka aka, enwere mwepụta ọsọ ọsọ ebe a na ọ fọrọ nke nta ka m chefuo na obere igwe kwụ otu ebe 4 na-abịa na ihu ihu n'ihu nkwuputa na na ndụdụ a na-amị ihe dịka 80 millimeters, nke mere na ị ụgbọala n'elu ezigbo ike teren nwere ike na-enwe a nnọọ ala na-agba ịnyịnya na-ekwu okwu nke nkasi obi, e nwere ụfọdụ n'ezie mara mma ewepụghị taya na a igwe kwụ otu ebe mgbe ị na-ele anya na a okpu agha. Ndị a bụ ezigbo siri ike, eeh, ha nwere ihe ntinye akara mgbapụta n'ime ma ọ bụ ihe na-ekpo ọkụ mgbe ahụ ị kwesịrị ịdị mma, ee, na ụfọdụ ihe ukwu banyere ụdị abụba ndị a bụ na ị nwere ike ịpụ n'okporo ụzọ na ntakịrị ụzọ. igwe ndị a na ihe atụ mgbe ị na-agba ịnyịnya na gravel ma na-aga ngwa ngwa n'ihi na igwe kwụ otu ebe a nwere ọsọ ọsọ nke 32 mph ka ha wee nwee ike ịga ngwa ngwa ma nwee ezigbo osooso ngwa ngwa.
Ya mere ọ bụrụ na ị na-agba na gravel ma na ị nweela ahụmịhe na igwe ịgba ọsọ ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe na taya dị gịrịgịrị, ị maara na ụkwụ ndị ahụ na-adị mfe ịhapụ gị n'okpuru ihe dịka gravel ways wee buru abụba dị ka ndị a n'ezie na-enye gị otu ọmarịcha obi ike onwe onye na njem dị otú ahụ na mbụ m ga-eme ngosipụta dị mkpirikpi. Ma bido. Anaghị m achị ọchị mgbe m mere nke a maka na ọ nwere ike iyi ntakịrị ihe ihere, um, echeghị m na ọ dị onye enwerela ya ya echegbula onwe gị ma ọ bụrụ na ị buru ụzọ pịa pedal ahụ, yabụ ihe ọ bụla ị mere ga-enyere aka. kpoo ya ma gbaghaa ya wee mee otu ihe ahụ n'akụkụ nke ọzọ, mgbe ahụ ọ nwere ike ịdị mfe karị, ọ bụrụ na ị bịa ebe a uh, ọ na-ewepụ kickstand na mbụ wee gafee ebe a ị ga-ahapụ ịhapụ ngwa ngwa ahụ n'etiti igwe kwụ otu ebe wee bulie ya elu, ị ga-ahụ na igwe kwụ otu ebe ahụ na - akwụsị, ọ bụ ntakịrị nsogbu mana ọ na - enyere aka ma ọ bụrụ na i buru ụzọ tinye akụkụ etiti nke igwe kwụ otu ebe ma ị ga - eme nke ọma karịa ma ọ bụrụ na ị lelee ala ebe a, nke bụ n'ezie de bịanyere aka na-anọdụ ala ka ala nke gị igwe kwụ otu ebe na-echebe nke ahụ dị mma n'ebe ahụ nke mere na ọ bụghị nke ọjọọ, ị na-ejegharị na ya Helenit mara ezigbo mma, ị nwekwara ike ịpịkọta aka ahụ , nke ọ folds pụọ. dị ka ya, ruo mgbe m nwere ike ịgwa na ọ nweghị ezigbo ụzọ iji chebe ya ozugbo ị tụkọtara ya ka ị wee nwee ike iji obere bungee ma ọ bụ ihe ijide ya iji mee ka m banye Mara ihe ndị a ma ọ bụrụ ' achọtala ụzọ ịpịpịa ya ka ọ ghara ịkwaga, mana echiche dị n'azụ a bụ isi mgbe ị dị mkpụmkpụ na ohere na enweghị ohere nchekwa.
Eleghi anya i bi na obere ulo n’obodo ma i nweghi otutu ohere n’ime ulo gi yabụ nke ahu di nma n’ihi na inwere ike itinye ya n’ime ime ulo obula n’agbanyeghi ma ikwaga ma banye ugbo oloko ma obu ugbo ala dika imaatu, mgbe ahụ i nwere ike n'ogige atụrụ ya elu gị igwe kwụ otu ebe na-etinye ya na ụgbọ okporo ígwè na ị nwekwara ike-ewe ya na gị d. na-esk na-arụ ọrụ ya ka ị ghara ichegbu onwe gị banyere idebe ya n'èzí ma ee, izu ohi n'ihi na ị gaghị achọ ihe a dị mma, ọ dị mma ugbu a maka ngosipụta nke osooso na ọsọ ọsọ, nke ahụ nwere ike Bike Mini 4 bido ihe dika 32 mph dika mkwuru na mbu, gbaa mbo hu na inyochacha m zuru ezu nihi na o n’egosiputa etu igwe kwụ otu ebe siri di n’obodo gi ebe enwere otutu iwu d ị iche na gi onwe gi na mba di iche. na iwu Lelee nyocha anyị, mana nke a na US ga-akụ 32 mph. Ọ nwere ezigbo osooso ọsọ ọsọ, nke m ga-egosipụta n'otu nkeji, na anya ọ nwere ike ịga ihe ruru 45 kilomita na otu ụgwọ nke batrị a, batrị ahụ na-ewekwa ihe dị ka awa ise na isii iji kwụọ ụgwọ zuru ezu.
Nke ahụ mara mma, mana gbaa mbọ hụ na anya ga-adabere n'ugwu ole ị na-agbago na ibu gị, yabụ ụgwọ gị na igwe kwụ otu ebe na ugwu ole ị na-agbago, nke na-ekpebi kilomita ole ị ga-aga, mana ọ bụ ọ ga-adị mma n’agbata kilomita 40 na 45, ka anyị hụ ọsịsọ nwata a nwere ike ibudata gị. Nke ahụ bụ ngosipụta nke m na n'ụzọ nkịtị dị nnọọ trotul a igwe kwụ otu ebe bụ ibu ọsọ na m na-eche ngwa ngwa karịa na na ị na-mara mma nke ukwuu na a ọgba tum tum otú na ọ ga-n'ezie ịbụ dị ka iwu dị ka nke ahụ ga-abụ ya mere ezi na m aga eme nnwale ngwangwa nke pedal na-enyere aka.Ugbu a, m ga - aga ụkwụ ụkwụ, ọ ga - enyere anyị aka, anyị ga - abụ onye izizi, ọ ga - ewe oge iji banye, ọ dabere na ngwa ị nọ na ya mere, m na na na hardest, nke bụ nọmba asaa ala Kwadobe, um, na ga-abụ nnọọ mfe na a ugwu na m ga-echigharịkwuru ike ma ọ bụ pedal aka, na-akpali m n'ezie na-enweta na igwe kwụ otu ebe ruo 25 mph Ya mere, m na-eche na trotul bụ nanị 20 mph, ma ọ bụrụ na ị na-eji pedal aka na asaa gia na pedal aka ruo ise mgbe ahụ ị nwere ike nweta 25 kilomita kwa awa o Nweta otu awa nke nwa a Ọfọn nke ahụ bụ maka nyocha m na ngosipụta nke igwe kwụ otu ebe na-acha uhie uhie Rad Mini 4.
Enwere m igwe kwụ otu ebe a n'anya nke ukwuu, echeghị m na m ga-ahụ ya n'anya etu onye na-agba ọsọ si pịa njikọ dị n'elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere onye na-agba ọsọ ọsọ, ọ dịkwa ezigbo igwe kwụ otu ebe, mana ọ dị ezigbo iche na a dị iche iche nke onye nwere ike dị iche iche ojiji ya mere hụ na lelee a nyochaa Onye maka a foldable e-bike bụ insanely ngwa ngwa na insanely fun na-agba ịnyịnya na m hụrụ n'anya otú obere ọ bụ mgbe ọ na-apịaji. Ya mere, igwe kwụ otu ebe a ga-adị irè ma echere m na a ga-enwe ọtụtụ ndị mmadụ nọ ebe ahụ n'ezie, n'agbanyeghị afọ ole ị dị ma ọ bụ etu ị si arụ ọrụ na ọtụtụ ihe ma ọ bụ ụzọ ị na-eji igwe kwụ otu ebe, ga-ahụ n'anya igwe kwụ otu ebe a chọrọ. Ọ dị mma, enwere m olileanya na ị masịrị nyocha a Rad Mini 4.
Jide n'aka na ị nwere mmasị n'isiokwu a ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị, enwere ike ịkọrọ ya enyi gị nke na-eche echiche ịnweta igwe eletriki mbụ ha, ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ masịrị gị, denye aha na ọwa anyị maka isiokwu ndị ọzọ dị ka nke a Daalụ maka ikiri ma hụ gị oge ọzọ
Kedu otu ọsọ RadMini 4 na-aga?
20 kilomita kwa awa
Kedu ka arọ rad mini dị?
Ngwunye igwe eletrik dị mma ọ dị mma?
Kpakọba anyịnya igweichekwa na ohere n'ụlọ ma na-adịkarị Mkpa ọkụ ka ngwakọanyịnya igwe, ma chụọ àjàụfọdụnso, yabụ ha dabara naanị maka obere njem ma ọ bụrụ na ịchọghị ịkwụ ha ụgwọ kwa ụbọchị. Ka ọ dị ugbu a, obere wiil ha nwere ike ịrụ ọrụ siri ike nke okporo ụzọ ndị siri ike karị na olulu ndị dị na Londonokirikirinetwọkụ04/22/2021
Ọ na-aba uru igwe kwụ otu ebe?
Otú ahụ ka ọ dịkwampịachi anyịnya igwe kwesịrị ya? Ee, ha zuru okeigwe kwụ otu ebemaka ndị njem. Ọrụ ha na-eme ka ọ dịrị ha mfe ibufe na sistemụ njem ọha. Nwere ike iburu ha, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka izuru ya.
Olee otú rad ike anyịnya igwe otú ọnụ ala?
A obere e-igwe kwụ otu ebena ngwugwu a di ike Punch. Ejiri 6061 stampụ siri ike ma sie ike na-arụ ya. Nchara ndụdụ ahụ na-eweta ọnụ ala,ya merenke ahụ bụ otu n’ime ihe mere ihe nlere a bụ $ 200dị ọnụ ala karịakarịa ndị ọzọ. Ọ na-emekwa ka ụlọ ahụ sie ike ma na-agbatịkwu ala.
Ogologo oge ole ka igwe kwụ otu ebe na-aga?
Batrị nwere nkọwa ndị agankezi banyere afọ 5 nkeRadaranọkwa! Ndị na-agba ịnyịnya mgbe mgbe: onye na-agba ịnyịnya nke na-ekpocha batrị zuru ezu ma weghachite ya kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu,galee ihe dị ka afọ 2.5 nke ndụ site na batrị ha. Ndị na-agba ịnyịnya nkịtị: batrị onye na-agba nkịtịnwere ike idinso 6-7 afọ.24wa 24 2021
Kedu ọsọ ọsọ anyịnya igwe RadRunner na-aga?
Na 750W na 80 Nm nke torque na i nwere, naRadRunnerọrụ eletrikigwe kwụ otu ebehaziri maka ehiwe moto n'ezie na-enyere ike gị elu nkpoda mmasị / ugwu, na-akawanye gị kaRadRunnern'eluososonke 20MPH ukwungwa ngwasite na nkwụsị ndị nwụrụ anwụ (gosipụtara na vidiyo m na ala nke aRadRunnernyochaa), oge niileỌnwa Isii 19. 2021 g.
Kedu ọsọ ọsọ ịnyịnya igwe RadRunner?
Ọzọ, ka anyị kwuo okwu bara uru. Naigwe kwụ otu ebebụ 20 mph (32 km / h) Klas 2 e-igwe kwụ otu ebena a trotul, n'ihi ya, i nwere ike ma zip gburugburu na trotul na-emengwa ngwaọrụ nke njem, ma ọ bụ ịnwere ike iji ọkwa ụkwụ ise dị iche iche na-enyere aka ịbanye na mgbatị ahụ dị mma.5 ụbọchị gara aga
Ego ole ka radmini mpịachi abụba igwe kwụ otu ebe dị?
Electric ịkpakọba Abụba Bike. $ 1,499. Ekwela ka ‘Obere’ di n’aha ya duhie gi. O doro anya, RadMini nwere ike ịpịpịa ngwa ngwa mgbe ịchọrọ obere ụlọ, mana ebike a na-agbakọ ntụpọ mgbe ị dị njikere ime ihe na njem. Ike, mma, na ntụgharị iji mee ka RadMini bụrụ mgbakwunye pụrụ iche na mgbakwunye na ngwa ọgụ ọ bụla.
Kedu ogologo ogologo igwe ịnyịnya Rad Power bụ radmini?
A maara Rad Power Bikes nke ọma na igwe eletriki igwe eletriki zuru ezu a na-akpọ RadRover. Ọ dị mma, nwee ike n'okporo ụzọ, ma were ọnụ dị mma… mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ dị ka ngwaahịa a, nguzo dị elu bụ ~ 30.5 ″ yana ọbụlagodi na ụkwụ mgbapụ ọsọ ọsọ, ọ bụ naanị nnukwu igwe kwụ otu ebe ịkwaga ma chekwaa.
Ego ole ka igwe eletrik igwe eletrik RAD na-efu?
Ahịa: $ 1499.00 | Afọ Nlereanya: 2020 | The elu-nzọụkwụ version nke Rad si mpịachi, abụba taya, anya-ụzọ ike, kọmpat electric bike. Omenala 3.3 Home Categories Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Eletriki 3.